Al-Xariiri oo Dib Uga Laabtay Iscasilaadii uu Ku Dhawaaqay. | ogaden24
Al-Xariiri oo Dib Uga Laabtay Iscasilaadii uu Ku Dhawaaqay.
Dec 7, 2017 - Aragtiyood
Ra’iisul-wasaarihii Lubnaan Saad Al-Xariiri oo bilowgii bishii hore ee November sheegay in uu xilka iska casilay isagoo ku sugan magaalada Riyadha ee Sacuudiga ayaa si rasmi ah u sheegay in uu go’aankaasi ka noqday.
Sacad Al-Xariiri ayaa arrintan shaaciyey kadib kulan ay yeesheen Golaha Wasiirada Lubnan oo ansixiyey baaq uu soo jeediyay Al-Xariiri oo ah in dalka Lubnan ay dhex dhexaad ka noqdaan xiisada ka dhex taagan dalalka Carabta, Golaha Wasiiradiisa ayaa si buuxda u taageeray go’aankaasi.
Al-Xariiri ayaa xiligii uu iscasilayey sheegay in Iran ay farogalin ku heyso dalkiisa isla markaana kooxda Shiicada ah ee Xisbullah ay khatar ku tahay dalkiisa iyo waliba isaga naftiisa. Walow la sheegay in iscasilaadaasi ay ku cadaadiyeen Sacuudigu.
Al-Xariiri ayaa markii uu ku dhawaaqay iscasilaadiisa sadex todobaad kusii sugnaa Riyadha, isagoona ugu danbeyn dib ugu noqday dalkiisa hooyo, halkaasi oo uu todobaadyadii lasoo dhaafay kulamo kula lahaa hogaanka dowladaasi oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha wadankaasi oo diiday in uu aqbalo iscasilaada Al-Xariiri.
Sacuudiga ayaa si weyn u dhaliilay qaabka Sacad Al-Xariiri ulla macaamilo kooxda Xisbullah oo xubno kuleh xukuumadiisa iyo Baarlamaanka Lubnan. Sacuudiga ayaa xisbullah u arka khatar iyo gacanta militari oo ay Iiraan ku leedahay dalalka Carabta. Kooxdaasi ayaa kaalin weyn ka qaadatay dagaalka ka socda wadanka Suuriya